Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley oo ku adkaysanaya inuu Adisababa kasoo afduubto dadka uga carara iyo warar kale
Cabdi iley oo ku adkaysanaya inuu Adisababa kasoo afduubto dadka uga carara iyo warar kale
Wararka nagasoo gaadhay caasimada gumaysiga Itoobiya ee Adis ababa ayaa sheegaya 17/7/14 inay koox kamid ah kuwa dhidid dhowrka u ah gumaysiga ee Hawaarinta loo yaqaano ay Adis ababa ka Afduubeen 3 nin oo kamid ah shacabka ree Ogadenia. Nimankan la Afduubay ayaa la sheegayaa in ay markii horeba Adis ababa ku joogeen dhuumasho iyagoo kasoo cararay wadanka Ogadenia iyagoo waliba horaan ula shaqayn jiray kooxda Hawaarinta ee Jigjiga. Warka ayaa intaas ku daraya in ay sirdoonka gumaysiga Itoobiya arinkaas kawar heleen kuna qabteen inta u dhaxaysa Harar iyo Adis-ababa ka dibna ay jeelka utaxaabeen laba gaadhi oo qabaal ama cabdi bile ah oo ay saaraayeen koox Afduubayaasha kamid ahayd, waxayna halkii kasii daayeen nimankii 3da ahaa ee Adis-ababa laga soo Afduubay lamana garanayo meel ay ilaa hada ku danbeeyeen kooxdii Hawaarinta ee Afduubka samaysay.
Dhanka kale wararka aan ka helayno magaalada Jigjiga ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in lagu xidhay gabadh shacab ah oo qurbaha katimid say dalkeeda usoo aragto. Gabadhan ayaa lasheegayaa in ay socdaal ku kala bixisay qaar kamid ah gobolada iyo dagmooyinka wadanka Ogadenia gaar ahaan Gobolka Doollo waxayna ku soo laabatay magaalada Jigjiga halkaas oo lagu xidhay laguna xukumay 5 sano oo xadhig ah.
Dhinaca kale ciidamada Hawaarinta ee kusugan magaalooyinka Wardheer iyo Dhagaxbuur ayaa dab qabadsiiyay 2 madaraso oo magaalooyinkaas ku kala yaalay waxay sidoo kale madaaristaas ka bililiqaysteen wixii qalab ahaa ee yaalay. Maamulayaasha madaaristaas ayaa magacyadooda naloogu kala sheegay Sheekh cumar iyo Mcalin Maxamad. Arintan ayaa walwal cusub kusoo kordhisay qaar ku hawlana waxay ku tilmaamaan samafalada iyo madaraarista.